MP CUH DING KONGAH CNLD CENTRAL NIH CATHANH A CHUAH CANG – The Chinlung Post
MP CUH DING KONGAH CNLD CENTRAL NIH CATHANH A CHUAH CANG
June 29, 2020 admin Local News 0
2020 hrilawk ih MP cuh ding thu ah, CNLD Central ihsin Peng tin committee hnenah fiangten thu than reroasizo nan Peng hrekkhat ah theih palh le tuah palhaum lai ruangah,ahnuailam vekin thlun ding dan suah betasi. Hi thu hi Mipi lam khalin theihatha ding ti ruatin tarlangasi.
CNLD Peng (myone)Committee zaten thlun ding thucah: Pakhatnak.Peng Committee pawlin, 27.6.2020 zanlam nazi 4:00pm tiang, MP cuh duh hrang dilnak ca (form) pawmsak ding. Himi can khiah mi ṭhawn le tidanglam ṭulnakaumasile, Central lungkimpinak lak ding.
Pahnihnak, Peng Committee pawlin mah le peng sungih cuhtu ding le an cuhnak ding bial (constituency) zohfel ih hrilsinnak neih hnuah, Central ah ni netabik 19.7.2020 hlanah kuat ding. Pathumnak. Peng Committee in,ahrilsin mi MP cuhtu ding pawl cu Central inanemhnget lai hlanlo, dan vekin pawm hnget mi an si hrih lo ruangah, media, Fb le online ah suah hrimhrim lo ding.
Palinak, Sagaing ramthen, Magwe ramthen le Zakhaing ramkulh Chin Affairs Minister (CAM) cu Central CEC lawngin hril le nemhnget dingasi ruangah, Peng Committee in hrilsinnak nei loin, dilnak ca lawng Central ah kuat ding. Panganak,Thu danglamaumasile Central ah sim dingin leatlunih thusuah zaten thlun tengteng dingin kan lo theiter. CENTRAL CEC
CNLDမြို့နယ်ကော်မတီအသီးသီးမှ လိုက်နာရန်. ၁။ မြို့နယ် ကော်မတီများအနေဖြင့် ၂၇.၆.၂၀၂၀ ရက်နေ့ညနေ ၄းဝဝနာရီအထိ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း လျှောက်လွှာများကို လက်ခံရန်၊. ခြွင်းချက်အ ဖြစ်. ရက် တိုးချဲ့ရွှေ့ဆိုင်း ပါက ဗဟို၏ခွင့်ပြုချက်ရယူရန်၊
၂။ မြို့နယ် ​ကော်မတီ အသီးသီး အ နေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် အလိုက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို ၁၁.၇..၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ ပဏာမစိစစ်ရွေးချယ်ကာဗဟိုသို့ ၁၉.၇.၂၀၂၀ ရက်နေ့ နောက်ဆုံး ပေးပို့ရန်၊. ၃။ မြို့နယ်ကာ် မတီအသီးသီးက ပဏာ ​ရွေး​ချယ် ထား ​သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းသည် ဗဟိုမှ အတည်မပြု သေးသ. ​ရွေ့တရားဝင်အတည်မဖြစ် သေးသဖြင့် လူမှုကွန်ယက် ပေါ်တွင် ဖြန့်ဝေ ခြင်း မပြုရန်
၄။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့ ရခိုင်ပြည်နယ် ချင်း ရေးရာဝန်ကြီး. နေရာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီကသာလျှင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်၍မြို့နယ်​ကော်မတီက ပဏာမ စိစစ် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုပဲ လျှောက်ထားလွှာများကို ဗဟိုသို့ ပေးပို့ရန်၊, ၅။ ထူးခြားသည့် အခြေအနေရှိ ပါက ဗဟိုသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက်ရန်။. စသည်တို့ကို မပျက်မကွက် လိုက်နာရန်အကြောင်းကြားပါသည်။. ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ
KAWLRAM PO HMANH AH BOCHAN TAKTAK MI KAN PA LE PATHUM
MIPHUN PARTY SOISEL IN, NLD A TTANH MI PAWL RAK KA LET UH